အလုပ်သမားခေါ်ယူသောနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ – GoBit Co., Ltd.
GoBitသည် မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့၊ နီပေါ စသည့်နိုင်ငံများမှလုပ်သားများကို ခေါ်ယူမိတ်ဆက်ပေးသည့် အတွေ့အကြုံများရှိပြီး ဧည့်သည်တော်ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
ဒီနိုင်ငံများထဲတွင် GoBitမှ သင်ကြားရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင်အထောက်အပံ့ပေးခြင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံမှမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
ဘာကြောင့် မြန်မာလုပ်သားတွေကို မိတ်ဆက်ရတာလဲ?
၁. အခြေခံပညာရေးစနစ်အားကောင်းသောကြောင့် ဂျပန်စာတတ်မြောက်မှုမြန်ဆန်ခြင်း
၃. ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားသောနိုင်ငံသားများဖြစ်ခြင်း
စသည့် အချက် ၃ ချက်က အဓိကဖြစ်သည်။
စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း ၇၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဖြစ်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် အရေးအဖတ်၊ အပေါင်းအနှုတ်စသည့် အခြေခံပညာရေးကို တော်တော်များများတတ်မြောက်ကြသည်။
ထပ်ပြီး ဘာသာစကားတွင်လည်း ဂျပန်စာနှင့်မြန်မာစာသည် သဒ္ဒါအားဖြင့် အတူတူဖြစ်သောကြောင့် ဂျပန်ဘာသာစကားကို သင်ယူရလွယ်ကူစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျောင်းပြီးလျှင် ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် ကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ပျံပွားမှုနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုတို့ကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၄၈ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းဖော်ပြလေ့ရှိကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေသည် ဂျပန်ယန်း ၂ သောင်းခန့်သာဖြစ်သောကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ပြီး မိဘထံသို့ပိုက်ဆံပြန်လည်ပေးပို့ချင်သော လူငယ်များ များသထက်များနေပါသည်
တဘက်တွင်လည်း ယခုလက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံသို့လုပ်သားအများဆုံးပို့ဆောင်သောနိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အခြေခံလစာမှာ တဖြည်းဖြည်းမြင့်မားလာမှုကြောင့် ထူးချွန်လုပ်သားများသည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်းမှာသာအလုပ်အကိုင်ကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြသည်။
မြန်မာပြည်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ လုပ်အားခနိမ့်ပါးနေသောကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အလုပ်လုပ်လိုသော အရည်အချင်းနှင့်ပြည်ဝသည့်လုပ်သား အများအပြားရှိသည်။
နိုင်ငံသားများ၏၉၀ရာခိုင်နှုန်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ပြီး မိဘနှင့်အထက်လူကြီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ဆုံးမမှုကိုခံယူလေ့ရှိကြသည်
ဂျပန်လူမျိုးများနည်းတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင်လည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတူညီပြီး အသေးစိတ်မှု၊ သေသပ်မှု စတဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်
၁. ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ အသက်အရွယ်ကြီးမြတ်သူကိုရိုသေလေးစားသောအလေ့အထရှိသည်
မနက်တိုင်း ညတိုင်း ဆုတောင်းဝတ်ပြုခြင်းပြုလုပ်ကြပြီး အထက်လူကြီး၏သင်ကြားဆုံးမမှုကို လိုက်နာခံယူလေ့ရှိသည်။ မိသားစုနှင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှလူတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ပြီး အချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်မှုနည်းပါးကာ စိတ်နေစိတ်ထားလည်း တည်ကြည်ရင့်ကျက်သူက အလွန်များသည်
၂. အလုပ်ကြိုးစားပြီး ရိုးသားကြသည်
ပညာရေးတွင်လည်း “ အထက်လူကြီးကိုလေးစားလိုက်နာရမည်” “ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုရိုသေရမည်” စသည့်ပညာရေးမျိုးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ဒီအတွက် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း မှန်ကန်တိကျမှုရှိခြင်း စသည့်တို့နဲ့ပြည့်စုံသူများဖြစ်သည်
မြန်မာနိုင်ငံသည် အလှူအတန်းအလွန်ရက်ရောသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံကပြုလုပ်သောစစ်တမ်းတွင် ဒုတိယမြောက်အလှူအတန်းပြုလုပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထပ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းက လစာတစ်လစာခန့်ကိုအလှူအတန်းပြုလုပ်ခြင်း ဘော်လန်တီယာလုပ်အားပေးခြင်းများကို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဘော်လန်တီယာကူညီလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းသူများကို အလှူအတန်းပေးခြင်း စသဖြင့်စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အနစ်နာခံခြင်းလို့ပြောရလောက်အောင် လူအချင်းချင်းကူညီတတ်သောစိတ်နှလုံးပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသည်